‘जातीय विबिधता, संस्कृतीक विबिधता, भाषिक विविधता र धर्म निरपेक्षता मुलुकका सुन्दरता हुन्’ (भिडियो सहित ) – पुरा पढ्नुहोस्……
‘जातीय विबिधता, संस्कृतीक विबिधता, भाषिक विविधता र धर्म निरपेक्षता मुलुकका सुन्दरता हुन्’ (भिडियो सहित )
जातीय विबिधता, सांस्कृतीक विबिधता, भाषिक विविधता, भौगोलिक विविधता, धर्म निरपेक्षता यो मुलुकका सुन्दरता हुन् । यी र यस्ता महत्वपुर्ण विविधता हाम्रो शक्ति हुन् । कमजोरी कदापि होइनन् ।
तर केही मानिसहरु यो विविधतामा हिलो छ्याप्न खोज्छन् र एक अर्का विरुद्ध बोल्न लेख्न बाध्य पार्छन । सामाजिक संजालमा केही यस्ता व्यक्तिहरु सक्रिय छन् जसले जातीय क्षेत्रीय, भौगोलीक, लैगिक कुरा अभद्र तरीकाले पोष्ट गर्छन त्यो पनि नक्कली आइडी बनाएर ।
एक सच्चा नेपालीले अर्को नेपालीलाई जात, धर्म, क्षेत्र, भाषा, भेग, लिङगका कारण घृणा गर्दै गर्दैन । तथा कथित उच्च जात भनौदाहरुले विगतमा धेरैलाई अपहेलित गरेकै हुन् । विभिन्न अवसरबाट बञ्चीत गरेकै हुन्, छुवाछुत, धनी गरीब आदी विभीन्न नाममा दबाएकै हुन् ।
तर आजको पुस्ता हिजोको जस्तो छैन र भोलीको पुस्ता झन आजको जस्तो हुने छैन । कतिपय परिर्वतन समयले ल्याँउछ, ल्यएरै छोड्छ । केटा मान्छे हुर्के पछि जुगाँ आफै आए जस्तै हो ।
तर समस्या हामीबीच फाटो ल्याउने, वैमन्यश्यता बढाउने गिरोह सक्रिय भए भने हामी एक अर्कालाई तथानाम गाली गर्नमा उत्रिन्छौ ।
म फेरी पनि भन्छु समानताको लडाइ सकिएको छैन, उपलब्धीहरु संस्थागत भैसकेका पनि छैनन् । यो हाम्रो आपसी मामला हो, घरको मामला हो । हाम्रो विविधतालाई हाम्रो कमजोरी सम्झेर हामीबीच फाटो ल्याउने, घृणा पैदा गराउने, सतहभन्दा तल झरेर गाली गलौज गर्न विबश पार्ने काम केही व्यक्ति र संस्थाहरुले पाएका छन् ।
यस्ता गिरोहहरुलाई तपाई हामी मिलेर बसेको देखेर टाउको दुखेको छ । हामी लड्यौं भने तिनको दुकान चल्छ । अझ जातिय द्वन्द नै भए हाम्रो संस्कृतीमा अतिक्रमण गर्न मिल्छ, हामी मारकाटमा एक अर्का विरुद्ध उत्रिए तिनको हतियार कारखाना चल्छ ।
केही मानिसहरुले समाज भाँड्न त्यस्ता संस्थाहरुको जुठो र बासी भात खाएका छन् । तिनका काम धाम केही छैन तर लाइफ स्टाइल आलिसान छ । नेपाली नेपालीबीच नै झै झगडा मच्चाउन, एकले अर्कालाई रगत उम्लीने गरी उक्साउने र समाजलाई सधैपछि पारिरहने गिरोहले हाम्रो एकता, भाइचारा, सहन सक्दैन्न ।
हिजो मेरो पुर्खाले गरेको विभोदका लागि म माफी माग्छु र मेरो सन्ततीलाई त्यस्तो गलत शिक्षा र संस्कार कदापि दिने छैन । माया, प्रेम, सद्भावले सबै जोडिन्छ । एक जातिले अर्को जातिलाई होच्याउने युग बाट बाहिर निस्कौ हामी ।
कोठा भित्र मात्र बसियो भने हाम्रो परीधि त्यही कोठा भित्र मात्र हो । अरु केही देख्न सकिदैन तर कोठाबाट माथि उठेर छत वा कौसीमा बसेर हे¥यो भने सिंगो शहर देखिन्छ । सोचाइ फराकिलो पारौं ।
राजनीति गर्न केही मानिसहरुले धैरे मानिसको मन जित्न नसकेपछि, थोरै भएपनि मानिसलाई आफ्नो हातमा लिन जातिय, क्षेत्रीय मुद्धालाई आवश्यकता भन्दा बढी उत्तेजित बनाइरहेका हुन सक्छन् ।
चनाखो बनौ । सबै माग जायज छन् तर सकेसम्म कसैलाई गाली नगरी पुरा गरौ, गराऔ । भाई फुटे गवाँर लुटे भन्ने कुरा ठिक साचो हो ।
स्रोत:-सिधाकुराडटनेट बाट |
Prevसामसुङको एस–९ र एस–९ प्लस नेपाल भित्रियो , कति पर्छ नेपालमा मूल्य ? हेर्नुहोस
Nextमालिकले कुटेर नेपाली चेलीको ढाड र खुट्टा भाचियो, यस्तो अवस्थामा छन् शान्ता राई (भिडियो सहित )
अशोकको घर यस्तो झिलिमिल्ली बन्यो , अशोकका बुबाले भाबुक हुदै यस्तोप सम्म गरे-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
बच्चाले सिक्का , गुच्चा ,एसिड , ब्याट्रीहरू वा तिखो्धारितो बस्तु निलेमा के गर्ने ? जानी राख्नुहोस्
पशुपति शर्माको तीज गीत “वैमानीले ढाट्यो” चौबिस घण्टामै तोड्यो रेकर्ड, जताततै गीत बन्यो भाइरल- ( भिडियो सहित)
भाइ’रल वालिका कमला घिमिरेको पहिलो गीत रेक’र्ड, यस्तो बन्यो गीत- हेर्नुहोस (भिडियो सहित)